mini-miti inoshandisa mafuta motori matairi 58
"Design Bureau Klimova" - complexes "PROMETHEUS" yekuwana mafuta emvura kubva kumarudzi akasiyana-siyana ezvigadzirwa nemarara
Kune avo vasingadi kutenga mafuta anodhura
TECHNOLOGIES BUREAU YAKLIMOV
KUVARIDZA BUREAU BUREAU
CHIKAMU CHEZVANHU PASI-mini-factory
PRICE LIST kumiti ye PROMETHEUS-FARMER
Diesel mafuta, petrol uye gesi yekusimudza motokari dzenyu dzinowanikwa pamiti yemiti "PROMETHEUS" yekugadzira hofisi Klimov.
Kubva pazvinhu zvakasimba zvakasvibirira: maguta emaspala, malahle, peat, matanda matanda. Kubva pamvura yakasvibirira: mafuta, mazut, mafuta sludge, mafuta.
Nhasi mashizha matsotsi matsva matsva ezana remakore: tiri kutsvaga vatengesi munyika dzose dzepasi. Ita kuti pasi rako rive rakachena uye ribudirire.
Tinoziva: doro pyrolysis michero, evaporation michero yemarudzi akasiyana-siyana emvura, futi inopisa kuchenesa michero yemafuta, mafuta anokonzera mafuta, mashizha anopisa, kushandiswa kwemafuta zvinopisa, kushamba miti, vashandi vemvura yegungwa.
PRICE-LIST yemiti "PROMETHEUS-FARMER"<< download. pdf. >>
Sora pyrolysis plant "FUNGA"
Chinangwa che "pyrolysis" "CHIMBEDZERA".
Kugadzwa pyrolysis "murimi" Klimov Design Bureau okurega kufukidza zvinodiwa varimi uye madiki ari kupisa, peturu, Diesel mafuta uye magetsi, uye kugova pamusoro kierratys kwavo tsvina mhuri uye kutambisa zvavakanga vachida kuita. Nokudaro, kuwedzera kubatsirwa kwezvinhu zvakagadzirwa, kuderedza mari yekugadzira kwayo simba. Chipiri che "pyrolysis" CHIKAMU chakasiyana-siyana chinobvumira kushandura chero rudzi rwemarara mumutumbi wayo chaiyo: zvakasimba uye mvura yakasviba. Mvura yakasvibiswa inogona kushandiswazve mumiti yacho inosanganisira: motokisi yemafuta, mafuta emafuta, acid sludge, mafuta sludge.
Nomenclature mutsara weFERMER diyuniti maererano nehukuru hwehutachiona hukuru.
3 tani pazuva
(code F 1100) 500 мм 1800 мм 0,4 м3 mune 2 mazinga
8 tani pazuva
(code F 1101) 900 мм 2000 мм 1,3 м3 mune 2 mazinga
10 tani pazuva
(code F 1102) 900 мм 3000 мм 1,9 м3 mune 3 mazinga
25 tani pazuva
(code F 1103) 1400 мм 3000 мм 4,6 м3 mune 3 mazinga
Mifananidzo yeFERMER installation.
Kuiswa kwezvikamu zvekuisa nekushanda kweFERMER system.
Izvo zvinoshandiswa zveFERMER system zvinogona kushanda mumatanho matanhatu, kugadzirisa nenzira yakakosha yezvakaitwa mutengo uri kunze:
- 100% mafuta fluid;
- 50% mafuta fluid и 50% kubudisa gasi;
- 100% kubudisa gasi;
- 50% kubudisa gasi и 50% char;
- 50% char и 50% mafuta fluid.
Iyo inogadzirisa chikwata chekuiswa kwacho ine mudziyo wakavakwa mumvura (mafuta) shati. Pakubuda kwe 250 kW ye-thermal power, inopa imba inotonhora muna 2000 sq.m.
Kuwana kune vanopisa chechikamu chechikamu chepyrolysis chinogona kuiswa mune chimwe chezvikamu zvitatu: mberi, kurudyi, kuruboshwe.
Zvinyorwa zvepa feedstock zvinoshandiswa uye kubudiswa kwemareke ecoke zvine digiriro yekusununguka kwemadigirii 270 maererano nenheyo yakananga yeasitori. Nhungamiro yenzvimbo yevatengesi haifaniri kutungamirirwa nechinzvimbo chepakati pemumwe. Vatakuri vanogona kuchinja majeko emunzvimbo yavo kusvika kumucheto kubva pamasita makumi maviri kusvika kumakumi matanhatu ematope uye kuchinja urefu kuburikidza nekuwedzera. Iyo tsvina inodzokodzwa zvakare inofanira kunge yakapwanyika kuita zvidimbu kusvika 50 mm muhukuru.
Izvo zvakanakira kugadzira zvinoita kuti zvikwanise kuisa unit pyrolysis pane imwe nzvimbo yakamanikidzika yepamutengi, kuvaka chikamu mumutambo unenge uripo. Semuenzaniso chaiwo: Ndiani akatenga PROMETHEUS-FARMER uye anoda kuwedzera simba kuburikidza nemiti yakakura, PROMETHEUS-FERMER yakawedzerwa kune unyanzvi hwekugadzirwa kwezvinhu sekusungirwa kwekubvisa mvura kubva mumarara, kushandura zvimwe zvakasviba zvakaoma mumakona makuru makuru, kushandiswa kwehuwandu hweSWW kuwedzera.
Mharidzo yebindu PROMETHEUS-FARMER.
Tsanangudzo uye kushanda kweiyo pyrolysis CLOSE.
MHURI YOKUTAI FITANI PROMETHEUS-FARMER.
ZVINOKUDZIDZWA NEPROJECT AND TECHNO-ECONOMIC SUBSTANTIATION ye modular pyrolysis mbeu PROMETHEUS.
PROJECT FARMER AND TECHNO-ZVINHU ZVINHU ZVINHU ZVINOKUDZWA kuwana fertilizer kubva mumarara.
Complexes POTRAM yekugadzirisa matairi uye zvigadzirwa zvemabhiza rubber.
Kudzokorora mapurasitiki epurasitiki pa PROMETHEUS yakaoma ne pyrolysis.
Uwandu hwehuwandu hwemarara uye marara akasiyana-siyana.
Chiyero che pyrolysis mvura inowanikwa kubva kumarudzi akasiyana-siyana.
Mabhizimisi anotengeswa pakugadziriswa kwemarara yakasimba kuva mafuta uye magetsi.
Kutengeserana kunopa kushandiswa kwemalahle mumafuta, kupisa, magetsi.
Bhizimisi inoshandiswa kugadzira peat mugesi uye fertilizer.
Bhizimisi inoshandiswa kugadzira sludge kushandiswa kwemishonga mumagetsi nemafuta.
Bhizimisi inoshandiswa kushandiswa kwemafuta sludge mune mafuta uye simba.
Bhizimisi inoshandiswa kushandiswa kwemafuta sludge mune mafuta uye simba
Zvinokwanisika kuderedza mari yebasa rekuti "zero" nerubatsiro rwe mini-factory "PROMETHEUS-FARMER"?
Ndokusaka isu takatanga kuita basa iri. Isu tine chivako chikuru chisina purogiramu chinotora motokari yemwedzi pamadhora 1000, pamwe nekubhadhara kwekurasa marara uye munguva yechando nguva yekupisa mari inowanikwa ku $ 800 pamwedzi. Yakanga iri chido chedu kubvisa zvinhu zvisingakoshi zvekubhadhara. Chinangwa chacho chaiva chokupisa, magetsi uye hazvizodziviriri, se-ne-chibereko kune vose vane yepamusoro motokari yemotokari yemotokari dzenyu.
Ndingawana sei mari kushandisa PROMETHEUS-FARMER mini-factory?
Ikoko kune nzira dzakawanda. Ini ndichataura mhaka chaiye yakasvika mumusoro mangu: Ndakadanwa nemurimi anobva kuLithuania, achiziva kuti KB yangu iri kuitei, uye nekubata kwekuzvikudza ndakandiudza kuti: "Igor, ndinorarama pasi pemakominism." Ndakamukumbira kuti amuudze zvaaireva paakati iye "anorarama pasi pemakominism." Akati pane mari yakawanda zvokuti haana nzvimbo yekuisa. Uye zvose zvakatanga nekuti iye akanga ari mumwe wekutanga kuzviisa mumba make kuitira kugadzirwa kwegenerator gasi kubva mumarara nemarara, akabatana nejeriel generator kwairi. Akavaka mapurisa, uye chinonyanya kukosha mumasitoroji ndeye 90% yezvose zvinodhura, kuvhara mari yekupisa nemagetsi kuumba mamiriro ekukura nokukurumidza kwemiti. Kubva mumvura yakanatsiridza jekete yemagetsi edieleri, kupisa kwakatanga kutenderera mukati mekupisa, uye chiedza chakagadzirwa kubva kumagetsi. Uye zvaiva zvose pasina kwandiri. Akatanga kukura zvirimwa zviri nyore: radish, anyezi, lettuce nezvimwe zvakadaro. Akaiswa uye akaendeswa kumashambagitari. Zuva roga roga vanobva zvipasitatimendi kwandiri mari, asi ini handibhadhara chero chinhu, chete mubhadharo kuvashandi. Ipapo akabva atora mari yekuwana marara kubva kuvanhu 1 motokari yemotokari - 1 dollar. Somugumisiro, ndine mari yakawanda zvokuti ndakatotenga ngarava uye zvino ini ndichiri kubudisa zvikepe zvemazuva ano zvehydrofoil. Utongi hwangu huri munzeve yokuti mari inofamba nenzira imwechete: kwandiri. Munhu wese anondipa chikwereti, handibhadhari munhu chero upi zvake kana ani zvake.
Isu taundi guta rinokosha-chinangwa chokubvisa marara emisha kune rimwe guta rekutsvaira. Hatifaniri kunetseka pamusoro pezvinhu zvakasikwa, zvichava zvakakwana kwemakore zana, tichiri kuribhadhara. Isu tine pambani iyo yose midziyo yekugadzira mashizha uye vashandi vanofananidza vevanyori, tinogona here kuita mimwe michina isu pachedu nemitambo yako nokuda kwezvaunoda? Pasi pekutonga kwako, kugadzirisa uye kudzidzisa. Icho chiri kuedza zvikuru kuderedza zvakadhura zvinodhura zvekambani yako nekugadzirisa kushandiswa kwemari pamoto, magetsi uye mafuta ekutenga.
Iyi tsika kune mabhizinesi akawanda inobatsira zvikuru. Kuchengetedza mabasa, kuderedza mari yekugadzirwa kwechigadzirwa. Makambani ari kunze kwenyika anodzivirira tsika "matambudziko" mukunyora uye kubhadhara nguva, kuchengetedza mari yekushandiswa kwekutakura midziyo. Nokuda kworudzi urwu rwekubatirana, tinopa chikwata chenguva imwechete yekugadzirwa kweFERMER plant. Tinopa sangano rakakwana rezvinyorwa zvinyorwa zvekugadzirwa kwemiti. Kupa zvinyorwa muChirungu 15000 US $.
Ndezvipi zvakachengetedzwa kubva pakushandisa mbeu yako yeFermer?
Handizove wakachenjera, ini ndichapa nyore kuverenga kuverenga. Kunyatso kuverenga kuzviita iwe pachako uye usingaitirane neni, handina hanya kuti zvii zviratidzo zvichawanikwa kwauri pamapepa. Isu tinogadzira "FERMER" yevhareji yemamiriro ekugadzirisa matani mazana mashanu emasipoteri. Pamutengo we 1 ton yemaji inoshandiswa, 1 toni yemafuta - 25,000 rubles, 1 tani yemagesi - 25,000 rubles, 2 matani emalahle - 2000 rubles. Malahle achapisa mukushanda. 50000 rubles kana $ 1000 mari yezvemari pazuva. Kubvisa mari, iwe unogona kutarisira purogiramu yemamiriyoni 1 pamwedzi. Haisi kunyange rubatsiro, asi chokwadi chokuti kuburikidza nekubatsirwa kwekugadza iwe unogona kukanganwa pamusoro pezvinotengeswa zvebhizimusi uye nekukurumidza kubhadhara michero - iyo ndeyechokwadi.
Hi, unogona kuwana magetsi mangani kubva ku 1 ton yenzanga yemvura inogadziriswa 20 - 30%?
1 ton yenzanga yekudya inokwanisa kupa jenereta gasi kune 20 kW generator mukati maawa makumi maviri nemaviri. Sezvakaitwa mumuenzaniso wekare, kana uchigadzirisa matani mashanu ehuku yehuku, iwe unogona kupa bhizinesi yako 100 kW yekugara uine mutoro. Ini ndichapa tafura yemagetsi kubva kumarudzi akasiyana-siyana.
Dhaka yakawanda yezvinhu
Nzvimbo yegasi ndiyo m.cub. kubva pa 1 ton yemafuta
Cow dung 39-51
Mushonga unosanganiswa netswa 70
Pig manure 51-87
Shei Dung 70
Nhizi dzinodonha 46-93
Dombo kubva kune gorosi-nyama 240-510
imba yemarara 180-200
Zvipfeko uye kushambwa kwemvura 70
Pashure-doro bard 45-95
Zvisikwa zvakasvibiswa zvekugadzira shuga 115
Mbatanidzwa yepamusoro 280-490
Beetroot kumusoro 75-200
Vegetable madota 330-500
Bheri pellet 39-59
Zvinopisa kubva pakugadzirisa rye 165
Flax uye hemp 360
Davi yehute 310
Chibage silage 250
Nhamo, chingwa 539
Hove yakasviba 300
Kuenzanisa kwezvematongerwo emari inokonzerwa nekugadzira magetsi pane jenereta inonzi dizeli inoshandisa dizeli uye gasiyatoriti kubva mumarara yakasimba.
Mari inokwana 1 kW yechiteshi chemashizha dizeli pane peteroli
Mari inokwana 1 kW yechiteshi chemasimusi edieleri pane genereta gasi kubva mumarara yakasimba
Mari inoshandiswa nedizizi ndiyo 30 rubles / litre Mari yehuni yakasviba inenge ye1,4 rubles / kg Ivhareji yemari yeimba yakasviba yakasvibisa is 0.14 rubles / kg
Kushandiswa kwemafuta edizieri pa1 kWh pane 0.234 malita Kushandiswa kwemafuta akaoma pa 1 kW emagetsi kune 0.7 kg Kushandiswa kwemafuta akakwana pa 1 kW emagetsi ndey 1.1 kg
1 kWh inosvika 7.00 rubles 1 kWh inotora 0.10 rubles 1 kWh inokwana 0.16 rubles
Dear Igor Gennadievich. Ndinofara mudzokorore mashoko ako, kuzviona somunhu, asi chikuru (kwete rako) drawback ndechokuti zvibereko pyrolysis miti haisi zvakakwana kukosha kune vatengi uyo chaizvoizvo aizotaura hurumende kana sarudzo dzayo. Munyika maitiro kune muenzaniso, panguva yepamutemo, kutungamirirwa kwemuongorori weUnited States akaraira kushandisa pepa rakagadzirwa kubva kune zvakare zvakare. Saizvozvowo, somuenzaniso, Gungano reMitemo rinogona kuita kuti guta racho rive nemafuta ekushandisa pfuti chete, HERE! Lenin haana pasina inonzi parasitic wokudzora, kuora ... Zvino, kunyange kana paine dzimwe nhengo dzeParamende vanorera nyaya muzvirevo nemaonero, ivo oligarchs mafuta nguva dzose chiokomuhomwe chero Sachs kana kusarudza uye regai kupa pfungwa iyi yakazadzika !!!!!
KB Klimov, nenzira ipi zvayo, haifungi nezvebasa rake sechinhu chekugadziriswa kwepasi rose kwehupfumi. Ini ndoga ndichange ndakafara kana nemubatsiro wemidziyo yedu, mumwe munhu achavandudza mararamiro avo uye ave ehupfumi. Ndiri kushamiswa zvikuru neChi Lithuanian pfungwa yekujekesa, mumutambo unoshandiswa nemurimi anobva kuLithuania: "Communism mune rimwe chete bhizinesi." Mukukudza kwake muti unonzi "FERMER".
Mharidzo, kana shredder ichikuya zvinhu zvakasvibirira kusvika masendimita mashanu, zvakadini zvingapinda muzvinyorwa (ndinoreva kuti vangani vanovata mapuranga vanoda kupwanyika kuti vazadze retort).
The Vhoriyamu pyrolysis reactor 1 bv. chirimwa waivako kunotsamira kwete Vhoriyamu reactor (a wehunyambiri dzinodzikinyidza), kunyanya pamusoro inosimbisa tembiricha yakatarwa nokukurumidza (ndiro arambe achirema pakati yakatsvuka zvinhu, ayo chafariz conductivity, tembiricha kuora uye zvimwe zvivako). Sezvo urongwa rokutendeutsa mbishi zvinhu zviri kuramba uye zvaitika kugadzwa pachayo anosarudza pomugove chitsama yakatsvuka zvinhu, kana uye sei vapinze uye tutunura kubva reactor. mbishi reactor replenishment kunoitika rwoga pasina kwevanhu opareta chete monitors uye anofanira kutora matanho Mini-chirimwa akanga inopiwa mbishi zvokuvakisa kubudiswa, mbishi zvinhu kuvapo sensors "achiyambirawo" kana padanho iri Hopper pamwe akadzvinyirirwa mbishi zvinhu kupfuura zvakafanira. Izvi kunonzwisiswa sechinhu otomatiki chirimwa kutanga chiratidzo kontolnogo nguva kana panguva mumaawa kwete zadzai inosimbisa Hopper, kusanganisira vanorega muoti rikurumidze. Izvi zvinoita kugadzikana chatingatevedzera parameters yokupedzisira chigadzirwa, asi akaramba ari kwacho, mwero kunonyanyisa pakati mbishi zvinhu kubudiswa pezvakaitwa pasina vachibayira kunaka yezvokutengeserana chigadzirwa nzira yokubudisa. Kana opareta asingadi kutora chero paruzhinji matanho chokuzadza Hopper pamwe akadzvinyirirwa pakugadzira zvinhu, fekitari kushandisa michina, ichatapwa zvokurega muitiro uye kubereka kumeso zvinoerera tembiricha iri reactor uye kumisa kushanda chirimwa. Processing pakati mbishi zvinhu rinomira, kusvikira chiratidzo iri kugamuchira, kuti yakatsvuka zvinhu Hopper achangobva kukasawedzerwa, uye chirimwa ichabudisa vomurova pacharo ari mbudo muoti kuti ironge rudzi uye anoramba ribude pakugadzira zvinhu, kusvikira zvakare hakumusvitsi kana kushanda chirimwa opareta prinunuditelno chikwata haingasviki kurega. Automatic chirimwa zvakare atanga muitiro zvokurega muitiro kana chero abnormality kana kana paine mukana kupa zvokuzvidzivirira abvume muzvigadzirwa muitiro kana kunaka wokupedzisira chigadzirwa.
Iyo midziyo inofadza chaizvo. Asi pane mumwe mubvunzo unokosha zvikuru: pane maonero akanaka maHurumende Ecological Expertise here? Pasina iyo, chero zvivako zvekugadziriswa kwemarara yakadzika emvura hazvigoni kutenderwa.
Kuzvinyorwa zvinyorwa (pasipoti, gwaro rekushandisa) zviyeuchidzo zvinotevera zvakabatanidzwa pamiti:
- Customs Union Chiziviso chekuwirirana;
- Chikwangwani che Customs Union chechimiro chezvinhu;
- Ecological certificate yekutevedzwa kwepyrolysis unit "PROMETHEUS", "PROMETHEUS-FARMER".
Mushonga we pyrolysis wemuti unenge wakagadzirirwa purogiramu yekuisa sampuli yemusanganiswa wemhepo-gesi, iyi inoshandiswa purogiramu haina kukonzera kukundikana nekudonha kwezvinhu zve pyrolysis munzvimbo. Chii chinoita kuti simiti "PROMETHEUS-FARMER" ive imwe yemiti yakasununguka inogadzikana munyika yose.
Taura nemutsa, chikoro chepi chinoshandiswa nemidziyo yatinoda?
IV dambudziko rekudzivirira hutachiona hwehutachiona huno hutachiona hwehutachiona hunotyisa.
Ko mini-factory inopa mari yakawanda zvakadini pamoto? Ndingava nezvimwe here?
Я уже указывал: "Pakubuda kwe 250 kW ye simba rinopisa, iro rinopa imba inotonhora muna 2000 sq.m.". Iko kuverengwa kwakagadzirwa kune imwe nzvimbo yekugadzira mumagetsi echitsigiri chemadhigirii makumi maviri nemazuva masere ezuva -40 degrees kunze kwekamuri. Maximum kana ukashandura mvura kune inodikanwa ye 400 kW. Mukuwedzera: kubva pakuyerera kukuru kwemusanganiswa wemafuta-gesi inoenda kune imwe nzira uye inobatwa nemhepo inotonhora yekuwana mafuta uye mafuta. Sezvo zvashandura kupora kwehutano hwehutano-hutano hwehutano hwehutano, imwe zana kW inogona kuwanikwa. Somugumisiro, 500 kW.
Mubvunzo wekucheneswa kwemafuta. Kuti uwane huni hwehuwandu hwakawanda hunodiwa sei?
Apo petrol petrol uye dielel fractions kubva pa pyrolysis mvura dzinobva, zvichibva pakuita heterogeneity mu morphological composition yezvinhu zvakasikwa, mutengo wezvinhu hausi nguva dzose yakakwana. Inogona kuva nemvuri yemajena, tsvuku, kofi, turbidity. Kupa mafuta kana kudzoka kutonga uye kusingaoneki, ndinokurudzira kushandisa zvigaro zvekuita sarudzo.
Rwendo rwezvigadzirwa zvekugadzira zvekutsvaga mafuta >>VERENGA IZI<<
PRICE LIST yezvinhu zvinoshandiswa kushandiswa kwemarara
PRICE-LIST ye evaporators emafuta uye mini-refineries
PRICE-LIST yezvirimwa zvekuputika mafuta mafuta mumotokari dizeli
PRICE LIST yezvirimwa zvekugadziriswa kwemafuta anoshandiswa mumafuta ekutanga
PYROLYSIS KUISANGWA KUNYAYA DZOKUDZIDZA NOKUDZISWA KWENYIKA "KB KLIMOVA"
Mishonga ye pyrolysis yemarara "FERMER".
Maitiro ekudhinda kushandiswa kwemiti "PROMETHEUS-FERMER".
Kompanovochnye vanodhirowa zvinomera "Prometheus-MURIMI".
MINI-kunatswa "KB KLIMOVA"
Evaporator ye mafuta asina kuchena "KI-1 electro",
Mini-refinery Evaporation chikamu "Tiny" yekutambira mafuta uye mafuta (code105).
Modular evaporating unit "Starlet-1" nokuda kwechikamu chemukati chemafuta-ane liquid (code201).
Block of vacuum sorption cleaning of fuel
ZVIMWE ZVOKUDZIDZA ZVINHU ZVINHU ZVEMAI "KB KLIMOVA"
KUTANGA KUTUNGA "PROMETHEUS"
PLANTS KUNOGONA MAFUI "KB KLIMOVA"
Factory yemafuta emabhizimusi KB Klimova "PROMETHEUS-OIL"
Dyara "PROMETHEUS-OM" yekugadziriswa kwemafuta emotokari akashandiswa.
PLANT "PROMETHEUS-M" yekuwana mafuta ekutanga kubva pamafuta emafuta.